प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कहिलेसम्म शासन चल्छ ? | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ असार १७, बिहीबार १७:४१
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कहिलेसम्म शासन चल्छ ?
HT २०७८ असार १७, बिहीबार १७:४१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको भूमिका प्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद अधिकारीले राष्ट्रपतिजस्तो गौरवको संस्था केवल प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्नेमा सीमित भएको बताएका हुन् । उनले कोरोना संकटले मुलुक ग्रस्त भएका बेला प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद विघटन गर्नु मुलुक र जनताका लागि बिडम्बनापूर्ण भएको बताए ।
पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले एकमतले अस्वीकार गरेको अवस्थामा फेरि विघटन गरेको बताए । सरकार उल्टो दिशामा हिँडेको भन्दै अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले जनताको संसदलाई विश्वास नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीलाई जोगाउन सक्नु भएन । आफ्ना सहयोगीलाई समेट्न नसक्नेले प्रतिपक्षीलाई कसरी समेट्नु होला मलाई विश्वास छैन । प्रधानमन्त्रीका कारण राष्ट्रपतिको गरिमा घटेको छ । राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्रीले गरेर मात्र पुग्ला र ?’
कोभिडविरुद्धको खोप ल्याउने भनेर सरकारले जति प्रचार गरेपनि खोप ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको भन्दै उनले यसले हाम्रो कुटनीतिक प्रयास कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको बताएका छन् ।
उनले नेपाली जनताले अहिले राणाकालिन बडाहाकिमको जस्तो शासन व्यहोर्नु परेको बताए । अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कहिलेसम्म शासन चल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्ष सहभागी नहुने
Spread the loveकाठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ । बिहीबार बसेको नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा यथास्थितिमा नजाने सर्वसम्मत निर्णय गरेको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए । […]
२०७८ श्रावण ६, बुधबार १२:३६
अघिल्लो सरकारले कानून विपरीत गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले किन बोक्ने ?
२०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार १८:४१
नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रदेश प्रमुख बर्खास्त र नियुक्तिको विरोध
२०७७ फाल्गुन २४, सोमबार १४:३०
संसदमा गजबको सेटिङ देखियोः प्रधानमन्त्री
२०७८ जेष्ठ १२, बुधबार ०८:०६
गौतम बुद्धले गरेको विद्रोह जसरी प्रतिगमनकारी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिकाविरुद्ध संघर्षमा उत्रिनु एक मात्र विकल्पः प्रचण्ड
२०७८ श्रावण ८, शुक्रबार २०:१९
२०७७ फाल्गुन ५, बुधबार १७:०९
श्रमजिवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न उपराष्ट्रपतिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण